मिस्टर ओमुक टोलाउँदै टोलाउँदै झुल्किए (भिडियोसहित)
म टोलाई....बोलको गीतबाट काठमाडौंका मिस्टर ओ.(ओमुक) सांगितिक दुनियाँमा भित्रिएका छन्।
उनले आफ्नो पहिलो गीत फागुन ५ गतेदेखि युट्युवमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन्। म टोलाई.....म टोलाई...बोलको गीत लोक पप शैलीमा छ।
गीतमा आदेश गुर्माछान एरेञ्जरको रूपमा रहेका छन् भने शब्द रचना र स्वर पनि गायक स्वयंको हो।
मेघावी शाक्य र मनिष श्रेष्ठले मोडलहरू सिद्धान्त कपाली, निशु शर्मा र विकास बर्तौलालाई दृश्यमा उतारेका छन्। भिडियो निर्देशनमा क्षमता प्रदर्शन गर्दै गरेका गायक मिस्टर ओ.(ओमुक)ले अगाडिको बाटो संगीत क्षेत्र नै रहेको संकेत गरेका छन्।
फागुन ७, २०७४ मा प्रकाशित
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुस्त बुटवल – संघीय संरचना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा १–१ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले काम अगाडि बढायो । ३ वर्ष अगाडि ५ नम्बर प्रदेशमा पनि बुटवलबाट नजिकै मोतिपुरमा ...